Management Method Level 1 (စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းအဆင့် ၁) – SMEBI
Management Method Level 1 (စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းအဆင့် ၁)
စီမံခန့်ခွဲမှုကို အခြေခံကစပြီးသင်ကြားပေးမယ့် 𝙎𝙈𝙀𝘽𝙞 – 𝘼𝙀𝘼 𝘼𝙨𝙚𝙖𝙣 ရဲ့ 𝙀𝙢𝙥𝙤𝙬𝙚𝙧𝙞𝙣𝙜 𝙔𝙤𝙪𝙣𝙜 𝙀𝙣𝙩𝙧𝙚𝙥𝙧𝙚𝙣𝙚𝙪𝙧𝙨 𝙋𝙧𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢 မှ
“𝙈𝙖𝙣𝙖𝙜𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙈𝙚𝙩𝙝𝙤𝙙 𝙇𝙚𝙫𝙚𝙡 1 အွန်လိုင်း သင်တန်း
လူငယ်များအတွက် စီမံခန့်ခွဲမှုကို စနစ်တကျ အခြေခံမှစနားလည်လာပြီး အလုပ်ခွင်တွင် လက်တွေ့အသုံးချနိုင်ရန် အာစီယံနိုင်ငံအတွင်း သင်ကြားနေသော AEA – ASEAN နည်း
စီမံခန့်ခွဲမှုကို စိတ်၀င်စားသော လူငယ်များ ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်မည့်သူများ ၊ မန်နေဂျာရာထူးသို့ တက်လှမ်းမည့် လူငယ်များ ၊ နှင့် လက်ရှိစီမံခန့်ခွဲမှု ကိုအဆင့်မြှင့်လိုသူများ အတွက်အထူးသင့်လျော်သော အဆင့် ၁ သင်တန်းဖြစ်သည်။
Unit 1 – Management ဆိုတာဘာလဲ ၊ ဘာတွေသိထားရမလဲ ၊ ဘယ်လို အရည်အချင်းတွေလဲ
Unit2– Model of Managerial Competencies မန်နေဂျာတွေ ၊ လုပ်ငန်းရှင်တွေ မှာ လိုအပ်နေတဲ့ အရည်အချင်းတွေဟာဘာလဲ
Unit3– Process & Goal ရည်ရွယ်ချက်ကိုရောက်အောင်သွားမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်တွေကဘာလဲ
Unit4– Planning ဆိုတာဘာလဲ ၊ အကြိုစီမံချက်မှာ ဘာတွေလိုအပ်သလဲ ၊ ဘာကြောင့်အရေးပါသလဲ
Unit5– Organization ဆိုတာဘာလဲ ၊ အဖွဲ့အစည်မှာ ဘာတွေပါ၀င်သလဲ ၊ ဘယ်လို အသုံးချရမလဲ
Unit6– Leading ဆိုတာဘာလဲ ၊ ခေါင်းဆောင်မှုရဲ့ အရေးပါပုံ ၊ ဘယ်လို ခေါင်းဆောင်မှုပေးကြမလဲ
Unit7– Controlling ဆိုတာဘာလဲ ၊ ဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲ ၊ ထိမ်းသိမ်းခြင်းမှာ ဘာတွေလုပ်ရမလဲ
Unit 8 – Level of Management & Skills စီမံခန်ခွဲမှု အဆင့်တွေကဘာလဲ အရည်အချင်းတွေကကောဘာလဲ
Unit9– Six core Managerial Competencies မန်နေဂျာ ၊ လုပ်ငန်းရှင်တွေ ရဲ့ အနှစ်သာရရှိတဲ့ အရည်အချင်း ၆ ချက်ကဘာလဲ
သင်ကြားပေးမယ့်ဆရာကတော့ SMEBi – SME Business Institute ရဲ့ Founder ဖြစ်သူ ဆရာစိုးဟိန်း (Soe Hein StartUp Coach) ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာက စိတ်ပညာ BA.Psychology အထူးပြုဘွဲရရှိခဲ့ပြီး ၊ ရန်ကုန်စီးပွားရေး တက္ကသိုလ် မှ စီးပွားရေး စီမံခန်ခွဲမှု မဟာဘွဲ့ (MBA) ရရှိခဲ့ပါသည်။ KPI Institute Australia မှ KPI Mastery Class ကို လည်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ MIoD & SMU မှ Certified Director တစ်‌ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ MSME လုပ်ငန်းများ တိုးတက်ရေးအတွက် အကြံပေးခြင်းများ အသင်းအဖွဲ့များ၏ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် အဖြင့်လည်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါတယ်။ မလေးရှားနိုင်ငံ ပီနန်းမြို့ အ‌‌ခြေစိုက် အာစီယံ စွန်ဦးတီထွင်ကျောင်း ၏ အာစီယံအကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့၀င် တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဒေသတွင်း စွန့်ဦးတီထွင်ပညာရပ်များအား အာစီနိုင်ငံများ အထိသင်ကြားပို့ချလျက်ရှိပါသည်။
𝑺𝑴𝑬𝑩𝒊 – 𝑺𝑴𝑬 𝑩𝒖𝒔𝒊𝒏𝒆𝒔𝒔 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒕𝒆 ဆိုတာဘာလဲ?
SMEBi ကျောင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏မြို့ကြီးများတွင် သင်တန်းကျောင်း ၈ ကျောင်း ဖွင့်လှစ်ထားပြီး၊
စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍရေး နှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးမှုဦးစီးဌာန၊ အသေးစားအလတ်စား ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာန နှင့် ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူညီချက်ဖြင့် MSME လုပ်ငန်းများ ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက် လူမှုအကျိုးပြု ပညာသင်ကြားရေး အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။ MSMEs လုပ်ငန်းများ အတွက်ဟောပြောပွဲများ လုပ်ငန်းခွင်အသုံးချ သင်တန်းများ ကို မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့သင်ကြား ပို့ချလျှက်ရှိပါသည်။ UN-SDG ကို ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိစွာလိုက်နာ ကျင့်သုံးနေသော ကျောင်းဖြစ်ပါသည်။
Asia Entrepreneurs Academy- ASEAN အာစီယံ နိုင်ငံများ၏ စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်များ သင်တန်းကျောင်း သည် မလေးရှားနိုင်ငံ ပီနန်းမြို့ အခြေစိုက်ပြီး အာစီနိုင်ငံများမှ ပညာရှင်များ နှင့် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။ AEA – Asean နှင့် SMEBi ကျောင်းတို့ အချင်းချင်း နားလည်မှုစာချွန်လွှာရေး ထိုးထားပြီး မြန်မာပြည်တွင်း နှင့် အာစီယံနိုင်ငံများသို့လည်း ပညာရပ်များ ဖလှယ်နေ သော AEA အာစီယံဒေသအတွင်း အသိအမှတ်ပြု စီးပွားရေး သင်တန်းကျောင်းဖြစ်ပါသည်။
UK အစိုးရအသိအမှတ်ပြု Association of Business Executive – ABE မှ SMEBi ကျောင်း ကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးပြီး နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု ABE Endorsed ကျောင်းဖြစ်ပါသည်
အောက်တိုဘာ ( 27 ) ရက်မှ November (4 ) ရက်နေ့အထိ ဖြစ်ပါတယ်။
နေ့စဥ် သင်တန်း Video တွေကို နံနက် ၉ နာရီမှာ တင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Video File ၂၀ + တင်ပါမယ်။
Live Video ကိုလည်း 29 ရက် နှင့်4ရက်နေ့ည ၈ နာရီမှ ၉ နာရီအထိ လွင့်ပြီး သင်တန်း အနှစ်ချုပ်ကို ပြန်လည် သင်ကြား‌ပေး ပြီးမေးမြန်းချက်များကိုလည်း ပြန်လည်ဖြေကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်‌။
#သင်တန်းကြေး ၂၅,၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အာစီယံ စွန်ဦးတီထွင်ကျောင်း နှင့် SMEBi ကျောင်းအသိအမှတ်ပြု သင်ရိုးညွန်းတမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းပြီးလျင် SMEBi ကျောင်းအသိအမှတ်ပြု သင်တန်းဆင်း
(E Certificate) လက်မှတ်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
E Certificate အတွက် #ငွေထပ်မံသွင်းရန်မလိုပါ။ (ကျောင်းမှ ထုတ်ပေးသော သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်အတွက် (+ ၅၀၀၀ကျပ်) ဆက်သွယ်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။)
အာစီယံစွန်ဦးတီထွင်ကျောင်း အသိအမှတ်ပြု သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်အတွက် Assignment ၅ မျက်နှာရေးသားပြီးတင်ရပါမည်။ AEA – ASEAN Certificate အတွက် 10$ ဒေါ်လာထပ်မံသွင်း၍ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ် ထပ်မံရယူနိုင်ပါသည်။
၂။ ငွေသွင်းပြီးကြောင်းပြေစာကို ချက်ဘောက်စ် သို့ ပို့ပါ။
၃။ Wave Money 09260009299 သို့လွဲနိုင်ပါတယ်။
လွဲသူရဲ့ အမည် Password တို့ကို Message ‌ပေးပို့ပါ။
၄။ Group Link ပြန်ပို့ပေးပါမယ်။
Account Name: Myanmar Endeavor Company Limited
KBZ Bank : 27810327800242601
AYA Account : 0254103010000089
KBZ Pay : 09260009299
Wave Account : 09260009299
သင်တန်းအပ်လိုသူများအတွက် 09 77 9999 707 သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
SMEBi is to Transform Access to Education.
Choose the most powerful courses and always be on demand.
Copyright © 2020 SMEBI